“मैले बुझेको राजनीति धेरै सरल छ राजनीति राष्ट्रसेवा हो।” अन्तर्वार्ता
वि.सं ३१ भाद्र २०७४, शनिबार ०१:०६
लामो समय देखि गत्यारोधग्रस्त नेपाली राजनीति, राजनैतिक अकर्मण्यता र असक्षमताका कारणले विकासको ध्रुवमा हिँड्नै नसकेको देशको परिस्थिति, वाद, विचार र सिद्धान्तका अनेक बहस र विवादहरु बिच व्यवस्था परिवर्तनका अनेकौं स्वरुपहरु भोगिरहेको तर व्यवस्था परिवर्तनले अपेक्षाकृत सम्बोधन गर्न नसकेका नेपाली जनआकांक्षा, विकास र समृद्धिका सपनाहरु अनि राजनीति संगै यसबाट प्रभावित हरेक क्षेत्रमा व्याप्त वेथितीहरुले निराश र दिक्क बनाइएको नेपाली समाजमा, निराशा लाग्दो भविष्य देखेर पलायनवादी सोच बनाइरहेको युवा पुस्ताहरुको विरक्त लाग्दो भिँडमा एक यस्तो नाम जसले फोहोर सफा गर्न फोहोरको थुप्रो छुनैपर्छ, गतिशील समाजका लागि वर्तमान युवा पुस्ता प्रत्यक्ष नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि उपस्थित हुनैपर्छ भन्ने दृढ सोच बनाएर अनि आफ्नै जीवनकालमा समृद्ध र विकसित देशको सपना देखेर तत्कालीन विवेकशील नेपाली दल र हाल एकीकरण पश्चातको विवेकशील साझा पार्टी मार्फत विगत ५ वर्ष देखि प्रत्यक्ष राजनीतिमा होमिएकी शिक्षा शास्त्र कि विधार्थी, भरतपुर महानगर निवासी युवा नेतृ सरला लामिछाने संग वर्तमान समसामयिक परिवेश र नेपालको राजनैतिक सामाजिक पाटोहरु बारे स्टिम न्युजले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश:
१. भइरहेको राम्रो जागिर छाडेर यो युवा उमेर मै राजनीति मा किन लाग्नु भयो ?
→ म सानै देखि राजनीतिको नजिक रहेकिछु, मेरो बुवा आफै कुनै एउटा पार्टीसँग आवद्ध भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ। समय सँगै राजनीति प्रतिको चाख झनझन बढ्दै जान लाग्यो। जब म परिवार भन्दा बाहिर समाजको कुरा बुझ्न सक्ने उमेरमा पुगे र कागज बाहिरको राजनीतिक क्रियाकलाप बुझ्न थालें तब मलाई छटपटी हुन्थ्यो। नेता र नागरिक बीचको दूरी बढेको देख्दा मलाई असाध्यै नराम्रो लाग्थ्यो। देशले भाेगेकाे दश वर्षकाे गृहयुद्ध र नागरिकले भाेगेकाे सास्तिकाे प्रत्यक्षदर्शी म पनि बने। यिनै दुख पिडा कसरी पछिका पुस्ताले भोग्न नपरोस् भन्ने कुरामा म अलि धेरै सोच्न थालें। त्यहि सोचले मलाई राजनीतिमा लाग्नु पर्छ र अहिलेको बेथिती, कुरीति र कुसंस्कार विरुद्द उभिनु पर्छ भन्ने दृढ संकल्प दिलायो र सुसंस्कृत राजनीतिको लागि राजनीतिमा होमिएँ।
२. बेतिथि कुरिति बिरुद्ध उभिन थुप्रै संस्थाहरू छन त्यहि काम लाई राजनीति मान्न मिल्छ? या भनौ तपाईले बुझेको राजनीती केहो ?
→ कुनै संस्थाको मात्र काम हैन बेथिती हटाउने, कुरीति र कुसंस्कार बिरूद्ध उभिने हरेक सचेत नागरीक को कर्तब्य हो । त्यही कर्तब्य निर्बाह गर्नको लागि अबिलम्बन गरिने नीति त्यो पनि उच्च निति जसलाइ राजनीति भनिन्छ । तर राजनीतिलाई आजसम्म अनेक वाद, सिद्धान्त संग जाेडेर जटिल रूपमा प्रस्तुत गरियाे। मैले बुझेको राजनीति धेरै सरल छ। राष्ट्र र जनताको हितमा जनताका प्रतिनिधिले निर्माण गरिएको राज्य संचालन नीति नै राजनीति हो। राजनीति राष्ट्रसेवा हो। देशलाई कहाँ पुर्याउने, कस्तो बनाउने आदि इत्यादी प्रश्नहरुका उत्तरहरु सबै राजनीतिमा हुन्छन्।
३. महिला भएर राजनीति मा ? घर कसले धान्छ ? यस्तो सामाजिक प्रवृतिले तपाईंको अभियानमा कतिको असर र चुनौती राखेको छ ?
→ महिलाको अनुकूल नीति, समाज र देश निर्माण गर्नको लागी महिला आफै अग्रसर हनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले बोकेकी छू। महिला मैत्री नीति हाम्रो राजनीतिमा समावेश गराउने हेतुले धेरै भन्दा धेरै महिला राजनीतिमा लाग्नु आवश्यक छ । आफ्ना हक र अधिकारका लागि लड्न नसक्ने अनि पितृसतात्मक मुलुकमा भएको महिला पुरुषको विभेदको मारमा परेका आवाजहीन महिलाको आवाज बन्ने कोशिस म गर्दैछु । जहाँसम्म घर धान्ने कुरा छ परिवारमा भएका सबै सदस्य (महिला, पुरुष) दुबैले कामको बाँडफाँड गर्ने हो भने घर धानेर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ। फेरी हामीले राजनीतिलाइ पेशा नबनाउने प्रण गरेका छौं। त्यसैले पहिले म राजनीति सँगै अर्को पेशा पनि गर्थे भने अहिले आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्दैछू। घरको काम, आफ्नो व्यवशाय र राजनीति बिचको सन्तुलन क़ायम राख्नु संघर्षपूर्ण भने अवश्य छ। यति संघर्ष बिना वैकल्पिक राजनीति पनि सायद संभव नहोला।
४. बर्तमान राजनीतिमा युवाको पहुँच नहुनुमा के कारण छ ? ती कारणको निराकरण मा युवा भएको नाताले तपाईंको व्यक्तिगत एवं पार्टीको भुमिका कस्तो छ ?
→ वर्तमान राजनीति हेर्ने हो भने सबैभन्दा खड्केको कुरो नै राजनीतिक दलहरुमा नेतृत्व हस्तान्तरण प्रविर्ती नहुनु हो। तिमी युवा छौ नेतृत्व तहमा पुगेर निर्णय लिनसक्ने अनुभव तिमी संग छैन, चुनाव भनेको ५० – ६० वर्षको उमेरपछि लड्ने हो जस्ता कुराहरुलाई अगाडी राखेर युवाहरुको मनोबल गिराउने काम हुँदै आएकोछ। साथै हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा धेरै युवाको दैनिकी सामान्य आय-आर्जन गर्नमै बित्छ। अर्को तर्फ हाम्रो पुस्तका युवाले राजनीतिको नकारात्मक पाटो मात्रै देखेको हुँदा यो देशमा केहि हुदैन भन्दै विदेशिने मानसिकताको विकास पनि भएको छ। यस्ता कुराहरुको निराकरणको लागि कार्यकारी प्रमुख पदमा एउटा व्यक्ति २ कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने र खुल्ला उमेद्वार नीतिबाट सक्षम र उत्कृष्ट युवा उमेद्वार पनि छनोट भएर आउन सक्ने पद्धति हामिले स्थापित गरेका छौं। साथै उद्यमशीलता परामर्श कार्यक्रम संचालन गरेर लगायात लगानिकर्ता र नवीन विचार बोकेका उद्दमशिल युवा बीच पुल बनेर हामीले काम गरिरहेका छौं। यसले लगानी र रोजगारको अभावमा विदेश पलायन हुन बाध्य युवालाइ स्वदेश मै आय-आर्जन गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ।
५.राजनीति देखि वाक्क भएका नया युवा जमात लाई र भरखरै राजनीति मा समाहित हुँदै गरेका युवालाई के के गर्नुस भन्न चाहनु हुन्छ ?
→ धेरै भन्दा धेरै पुस्तक पढ्नुस्, बिनम्र बन्नुहोस्। सामाजिक गतिविधिप्रति चनाखो रहनुस्, सकारात्मक वैचारिक बहसमा सदैव सहभागी बन्नुहोस् र अन्त्यमा तपाईं जुन स्थानमा हुनुहुन्छ त्यहीँबाट असल कामको समर्थन र गलत कामको विरोध गर्न कहिले पछि नहट्नुस।
( उहाँ तत्कालीन विवेकशील नेपाली दल चितवन अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हाल एकीकरण प्रक्रिया मा भएको हुदा सक्रिय युवा नेतृ को भूमिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ । )
पोखरा, भरतपुर र भैरहवा हवाईमार्गबाट जोडिए